तपाईंको पेन्सनसम्बन्धी आधारभूत कुराहरू | Australian Taxation Office
पेन्सन के हो ?
मैले सुपर बापत कसरी बचत गर्नु पर्छ ?
मेरो सुपरमा कसरी रकम जम्मा गरिन्छ ?
मेरो रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनु पर्ने रकम जम्मा गरिरहेको छैन भने के गर्ने ?
कसैले मलाई आफ्नो सुपर माथि समय अगाडि नै पहुँच राख्न सक्छु भन्ने प्रस्ताव गरेमा म सचेत हुनु पर्छ ?
मैले कसरी सुपर कोष (संस्था) को छनौट गर्नु पर्छ ?
मैले आफ्नो सुपर बचतको अभिलेख कसरी राख्ने ?
myGov को प्रयोग गरी आफ्नो सुपर खाताको अवस्था बुझ्नुहोस्
मैले आफ्नो सुपर बचत कसरी बढाउनु पर्छ ?
सरकारले गर्ने योगदानहरू
मैले आफ्नो सुपर खाताको बचत कसरी प्रयोग गर्न सक्छु ?
अष्ट्रेलिया छोड्ने अस्थायी बासिन्दाहरू
विदेशबाट जम्मा हुने सुपर बचत
तपाईंको पेन्सनसम्बन्धी आधारभूत कुराहरू
निम्न कुरासम्बन्धी आधारभूत गाइड
पेन्सन के हो
पेन्सनको लागि कसरी बचत गर्ने
पेन्सन बढाउन के गर्ने
पेन्सन वा "सुपर" शब्दले तपाईंले काम गर्दै गर्दा अवकाशपछिको प्रयोजनको लागि आफ्नो तलवबाट कट्टा गरेर बचत गर्ने रकमलाई जनाउँछ ।
तपाईंले अहिले गर्ने बचत अवकाशका बेलामा प्राप्त हुने भएकाले सुपर महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईंले सुपर बापत जम्मा गरेको रकम केही निश्चित अवस्थामा मात्र निकाल्न सक्नु हुन्छ । तपाईंको अवकाश वा तपाईंको उमेर 65 पुग्नुलाई यस्तो अवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रायजसो अवस्थामा तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको सुपर खातामा "योगदान" गरिदिन्छन् । यसलाई "सुपर ग्यारेन्टी" भनिन्छ । रोजगारदाताले गर्ने यस्ता योगदानहरू उनीहरूले तपाईंलाई दिने तलव वा ज्याला बाहेकका रकमहरू हुन् । तपाईंको रोजगारदाताले सुपर बापत कति रकम तिर्नु पर्छ भन्ने कुराको व्यवस्था कानुनले गरेको हुन्छ ।
साधारणतया तपाईंको रोजगारदाताले निम्न अवस्थामा अनिवार्य रूपमा सुपर बापत रकम जम्मा गरिदिनु पर्छः
तपाईं 18 वर्षको हुनु हुन्छ र प्रति महिना $450 (कर अगाडि) कमाउनु हुन्छ ।
तपाईं 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको हुनु हुन्छ र प्रति महिना $450 (कर अगाडि) कमाउनु हुन्छ तथा हप्ताको 30 घण्टाभन्दा बढी काम गर्नु हुन्छ ।
तपाईंले कहिलेकाहीँ, पार्ट टाइम वा फुल टाइम काम गर्ने भए पनि वा तपाईं अस्थायी बासिन्दा भए पनि यो नियम लागू हुन्छ । तपाईंसँग अष्ट्रेलियाली व्यवसाय संख्या (ABN) भए पनि तपाईं आफ्नो श्रम बापत ज्याला प्राप्त गर्ने ठेकेदार (कन्ट्राक्टर) हुनु हुन्छ भने तपाईं यसका लागि योग्य हुन सक्नु हुन्छ ।
रोजगारदाताले कर्मचारीको सामान्य आयको 9.5% रकम जम्मा गर्नु पर्ने नियम 1 जुलाई 2014 देखि लागू भएको हो । समय बित्दै जाँदा यो योगदान बढ्छ ।
सामान्य आय भन्नाले प्राप्त हुने पुरस्कार, निश्चित लाभांश, भत्ता र तलवी बिदा सहित सामान्यतया काम गर्ने अवधि काम गरेर तपाईंले आय बुझिन्छ । सामान्यतया ओभरटाइम बापत प्राप्त हुने आय साधारण आयमा समावेश हुँदैन ।
तपाईं पनि आफ्नो सुपर खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नु हुन्छ । कहिलेकाहीँ अष्ट्रेलियाली सरकारले पनि यस खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ ।
आफ्नो रोजगारदातासँग यसबारेमा गफ गर्नुहोस् । निजलाई कतिको रकम जम्मा गरिँदैछ, कुन कोषमा कति रकम जम्मा हुँदैछ भन्ने प्रश्न सोध्नुहोस्
तपाईं आफ्नो सुपर खाताको स्टेटमेन्ट जाँच्न वा सम्बन्धित निकायलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो रोजगारदाताले सुपर बापत रकम जम्मा गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सोध्न पनि सक्नु हुन्छ ।
तपाईंलाई आफ्नो रोजगारदाताले तपाईंले पाउने सुपर बापतको रकम जम्मा गरिरहेको छैन भन्ने लागेमा तपाईं हामीलाई 13 10 20 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
यस्तो प्रस्तावसँग सावधान हुनु होस् । यस्तो प्रस्ताव राख्ने व्यक्तिहरूले तपाईंलाई ऋण तिर्ने, घर वा कार किन्ने वा छुट्टी मनाउन जाने जस्ता प्रयोजनका लागि समय अगावै तपाईंको सुपर खाताको रकम प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने कुरा गर्ने छन् । यस्ता योजनाहरू गैरकानुनी हुन्छन् र तपाईं ती योजनामा सहभागी हुनु भयो भने तपाईंले ठूलो जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
उदाहरण – फिल जालबाट निस्कन सके
म विगत केही महिनादेखि कार किन्न रकम जम्मा गरिरहेको छु । मेरा एक सहकर्मीले मलाई उनका एक साथीको बारेमा बताए । उनका अनुसार ती साथी मलाई आफ्नो सुपर खाताबाट केही रकम झिक्न सहयोग गर्न सक्थे ।
मेरो भाग्य भन्नु पर्छ, मैले ATO को वेबसाइट हेरे र यस्तो काम गैर कानुनी भएको कुरा थाह पाएँ । यसरी मैले रकम झिकेको भए मैले 45% कर तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो । मैले जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन सक्थ्यो । यहाँसम्म कि मैले जेल पनि जानु पर्ने हुन सक्थ्यो । मेरो लागि यो गल्ती निकै महङ्गो हुन सक्थ्यो ।
प्रायजसो मान्छेहरू रकम जम्मा हुने आफ्नो सुपर कोष आफै छान्छन् । तपाईं यो सेवा प्राप्त गर्न योग्य हुनु हुन्छ भने तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंले काम गर्न थालेको 28 दिनभित्र तपाईंलाई कोष छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईंले लिखित रूपमा आफ्नो छनौट बताउनु पर्छ । तपाईंले कोषको छनौट नगरेको खण्डमा तपाईंको रोजगारदाताले आफैले कोष छानेर रकम जम्मा गरिदिने छन् ।
सबै रोजगारदातासँग 'पूर्वनिर्धारित कोष' हुन्छ र उनीहरू कोषको छनौट नगर्ने कर्मचारीको सुपर योगदान सो कोषमा जम्मा गरिदिन्छन् ।
तपाईं आफ्नो योगदान हाल क्रियाशिल (पूर्वनिर्धारित) सुपर खातामा जम्मा होस् भन्ने चाहनु हुन्छ तर तपाईंलाई आफ्नो खाताको विवरण थाह छैन भने तपाईं myGov को प्रयोग गरेर आफ्ना सबै सुपर खाता हेर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले आफ्नो सुपर कोषको कर फाइल संख्या (TFN) लिनु पर्छ । यसले तपाईंलाई आफ्नो सुपर खाताको अभिलेख राख्न, त्यसलाई विविध खातामा सार्न र सरकार वा रोजगारदाताबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ ।
तपाईं कोषले पठाउने स्टेटमेन्ट हेरेर उक्त कोषको TFN छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
निम्न प्रयोजनको लागि तपाईं myGov खाता सृजना गरी उक्त खातालाई ATO जोड्न सक्नुहुन्छः
तपाईंले अभिलेख राख्न छुटाएका वा बिर्सिएका तपाईंका सुपर खाताहरूको विवरण हेर्न
ATO मा राखिएको सुपर खाता पत्ता लगाउन सरकार, तपाईंको सुपर कोष वा रोजगारदाताले सुपर बापत जम्मा गरिनु पर्ने रकम जम्मा गर्ने खाता भेटेन भने हामी तपाईंको पक्षबाट उक्त रकम आफूसँग राखिदिन्छौँ
आफ्नो सुपर खाताहरूबाट आफूले इच्छाएको खातामा रकम स्थानान्तरण गरेर एकभन्दा बढी खातालाई एक खातामा रूपान्तरण गर्न एउटा कोषबाट अर्को कोषमा रकम स्थानान्तरण गर्दा बिदाका दिन बाहेक सामान्यतया तीन दिन लाग्छ ।
myGov खाता खोल्नुहोस् वा उक्त खातामा लग इन गरी ATO सँग जोड्नुहोस्External Link
हाम्रो अनलाइन सेवाको प्रयोग गर्नुहोस्
ato यापको प्रयोग गरी myGov चलाउनुहोस्
तपाईंको रोजगारदाताका अलाबा तपाईं पनि आफ्नो सुपर खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो कर अगाडिको तलवबाट आफ्नो सुपर खातामा 'तलवबाट कट्टा गरी रकम जम्मा गर्न (‘salary sacrifice)' सक्नुहुन्छ वा कर तिरिसकेपछिको आयबाट पनि रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले तलवबाट कट्टा गरी आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने विकल्प छानेको खण्डमा तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको कट्टा गरेर रहेको बाँकी तलवको आधारमा सुपर ग्यारेन्टी योगदान रकम जम्मा गरिदिन सक्छन् ।
तपाईं प्रत्येक वर्षमा कर नतिरिकन कम रकम आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने सीमाहरू पनि हुन्छन् । यी सीमाहरूलाई "क्याप्स (caps)" भनिन्छ । तपाईंले यी सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न खोजेमा कर तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । तपाईं आफ्नो सुपर खातामा $25,000 भन्दा बढी रकम (तपाईंको रोजगारदाताले दिने योगदान सहित) जम्मा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उचित परामर्शदाताको सल्लाह लिनुहोस् ।
तपाईंको आय निम्न वा मध्यम स्तरको छ भने तपाईं अष्ट्रेलियाली सरकारले गर्ने योगदानको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ ।
साधारण अवस्थामा तपाईं अवकाश लिएपछि आफ्नो सुपर खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, वित्तीय जटिलता र विशेष चिकित्सा परिस्थिति जस्ता केही अवस्थामा अवकाशअगाडि पनि तपाईं आफ्नो सुपर खाताको बचत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई समय अगावै उचित प्रयोजनको लागि आफ्नो सुपर खातामा रहेको रकमको आवश्यकता परेमा सोको लागि आवेदन दिनुअगाडि आफ्नो कोषलाई यो काम गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर सोध्नुहोस् ।
तपाईं अष्ट्रेलियामा काम गर्ने अस्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ र सुपर खाता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको खातामा सुपर ग्यारेन्टी योगदान गर्नु पर्छ । तपाईं आफ्नो सुपर खाताको बचत तपाईं अष्ट्रेलियाबाट बाहिरिएपछि प्राप्त गर्नु हुने छ । यो भुक्तानीलाई अष्ट्रेलिया छोड्दा दिइने सुपर भुक्तानी (DASP) भनिन्छ ।
न्यूजिल्याण्डका नागरिक र अष्ट्रेलियाका स्थायी नागरिक यो सुविधाको लागि योग्य हुँदैनन् ।
तपाईं यो सुविधा प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने जान्न र अनलाइनबाट वा कागजी फाराम डाउनलोड गरेर DASP को लागि आवेदन दिन ato.gov.au/departaustralia मा जानुहोस् ।
तपाईं विदेशबाट पैसा वा पेन्सन रकम अष्ट्रेलिया ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले केही विशेष कर नियमहरूको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ । यस बारेमा आफ्नो वित्तीय परामर्शदाता वा अध्यागमन एजेन्टसँग छलफल गर्नुहोस् ।
तपाईं सुपरको बारेमा अधिक जान्न चाहनु हुन्छ भने ato.gov.au/super मा जानुहोस् वा हामीलाई 13 10 20 मा टेलिफोन गर्नुहोस् ।
तपाई राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न भने तर कर अधिकृतसँग कुरा चाहनुहुन्छ भने अनुवाद तथा दोभाषे सेवा को टेलिफोन 13 14 50 मा सम्पर्क गरी दोभाषेको सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।
Last modified: 02 Apr 2020QC 62050